🥇 ▷ Kuwani waxay noqon doonaan qeexitaanka farsamo ee ugu weyn ee Sony Xperia XZ4 ✅
Kuwani waxay noqon doonaan qeexitaanka farsamo ee ugu weyn ee Sony Xperia XZ4
Liis ay ku qoran yihiin faahfaahinta ugu muhiimsan ee farsamo ee Sony Xperia XZ4 Waxay ugudbiyaan websaydhka qaab la sifeeyay.
Sida la qiyaasayo, cabbirrada aaladda waxay noqon doontaa 162 x 72 x 8.2 mm miisaankiisuna wuxuu ku jiri doonaa 191 garaam.
Waxay lahaan lahayd shaashad nooca 6.5-inch OLED at 3,360 x 1,440 pixels xalin wuxuuna xambaarsan yahay Corning Gorilla Glass 5. Qaybta saamiga waxay noqon doontaa 21: 9.
Yeelan doonaan 6GB Ram iyo 128GB kaydinta gudaha. Waa suurta gal in lagu fidiyo qaybtan ugu dambeysa kaarka MicroSD ilaa 512GB oo dheeri ah.
Lahaanshaha a bandhig aad u weyn, ma jiraan wax ka fiican batteriga fiican si loo magdhabo. Sidan ayaa ah sida batteriga Xperia XZ4 uu gaari doono 4,400 mAh. Intaas waxaa sii dheer, waxay la jaan qaadi doontaa tikniyoolajiyadda Kusoo Bixinta La-Qabsiga Qnovo.
Hab is dhammaystir ah, haddii aan u qaadanno aasaaska xanta hore, tan xigta calanka oo reer Jabaan ah ayaa yeelan doona processor-ka Qualcomm Snapdragon 855. Waxaan horay u aragnay qaar ka mid ah tijaabooyinka waxqabadka oo la fuliyay, waxayna u muuqataa in taleefankan uu noqon doono bahal dhab ah.
Si loo soo afjaro, Kaameerada hore waxay lahaan doontaa hal muraayad 24MP ah. Intii ka dambaysa waxaan yeelan doonnaa kamarad saddex-geesood ah. Qiimaynta ugu weyn ee 40MP dekedda, waxaa jiri doona xagal kale oo ballaaran oo 5MP ah iyo saddex meelood meel 16MP. A dabeecad xoogaa la yaab leh, laakiin ma ahan wax aan macquul aheyn. Si kasta oo ay ahaataba, ha ahaato xanta, waxay u egtahay in hadda laga bilaabo mustaqbalka dhow macluumaad cusub oo soo bixi doona oo ku kala duwan waxa lagu soo bandhigay maqaalkan.